Oromo Unity Efforts: :Yaalii Nagaa, Araaraa fi Tokkummaa ABO/QBO/Oromoo - WBO ZK ABOn:
Marsaan yeroo kun, akeeka tarkaanfii, ejjennoo, yaamichaa fi deegarsa Nagaa, Araaraa fi Tokkummaa WBO ZK ABO, Moonaa ABO, QBO fi Ummata Oromoof Dhiheesse kan ibsu, hubachisuu fi marihachiisu dha. Odeessaa haala Zoonii WBO Kibba Oromiyaa, Humna WBO ZK, Miseensotaa ABO, Ummata Oromoo fi qabsoo fuula sanaa kan dhiheessuu dha.
IBSA WBO ZK ABO-marroo3ffaa
Guyyaa: Muddee 19, 2009
Ibsa WBO ZK ABO-marroo 3ffaa.
(Itti-baha beellama yaamicha Muddee 15, 2009tti ZK/WBOtti jila ergachuu gartuulee ABO 3niif dhihessinee turree Oromoof gabaasuuf).
Akeeka tarkaanfii nagaa, araaraa fi tokkummaa moonaa dhaaba teenna ABO, QBO fi gurmuu ummata Oromoo keessatti akka buufamuuf, nuti humna WBO ZK ABO, akka fala maayyiitti taheetti amannu dhidhiibuuf jecha; carraaqqii hadhaooftuu dhibdeelee dhaaba ABO/QBO/tokkummaa Oromoo, gara dhabamsiisuutti geessee jiru akka waliin furannuuf, hirmaannaa tarkaanfiin murteeffannee jirru milkeessuu yaaluuf; Dirqamaa miseensummaan dhaabaa ABO, qoodni Oromummaa keennaa fi gaheen qabsaawaa nu illee ajajju bahachuu itti fufuuf; itti-gaafatama seenaa irbuun kaleessa seenne/Kaayyoon baaneef waliin nurraa kaa’ee hanguma tahee illee bahachuu hujiin mormachuuf; nuti WBOZK ibsa 0008/ibsa-wbozk-abo/2009, 29.11.09, baafnee turreen ijibaata godhuuf, gartuuleen ABO 3nuu akka jila isaanii gara dirreetti ergatani, qaamaan waliin wal geennuuf sirnaan afeerree, kabajaan beellamuun keenna ni yaadatama.
Akeekaa fi barbaachisummaa gara Dirree WBO Kibbaatti jila ergachuu gartuulee ABO3n gaafanneef.
Akeekaa, barbaachiummaa fi sabaabaan qaamaan jilli hoggana dhaaba ABO, bifa bakka bu’oota gartuulee sadeen kanaatiin (Murna ABO-ShG, murna ABO-QC fi murna ABO KY/’jijjiiramaa’) bakkuma jirru, dirree qabsoo Kibba Oromiyaatti ofiitti yaamneef;
i) Ammaas tarkaanfi, ejjennoo, yaamichaa fi walumaa galaatti akeekni nagaa, araaraa fi tokkummaa maqaa WBO ZK ABOtiin labsanne kun, dhuguma kan Dirree/Zoonii/WBO/humna/miseensota/qondaalota/ajajoota keennaa tahuu daballee isaaniif mirkaneessuuf,
ii) Barbaachisummaa, bu’aa, akeeka..kkf nagaan, araarri fi tokkoomuun jennu kun akka gamaaggama/xiinxala keennaatti hunduma keennaaf ( akka miseensota/hooggana/qondaalota dhaabichaa/ajajoota/zoonileeWBO/humnaWBO/loltootaABOf-walumaa gala dhaaba ABO, QBO, ummata Oromoo, qabsaawotaaf fardii, murteessaa jennee murteefaneef gahaatti itti ibsachuuf, gaaffilee, yaaddoo/shakkii, yaadota, gorsa, qeeqa…..fi kkf qaban cufaa waliin qulqulleeffachuuf,
iii) Miidhaa, bal’aa fi fafa haalli qaanii akkasuma badii dhaabaa ABO ykn gartummaan ABO keessaa maqaa, seenaa fi egeree dhaabichaa, QBO, Zoonilee WBO, WBO, miseensota ABO, deegartoota/ummata Oromoo irratti fiddee jirtuu waliin dhundhumachuuf; Yo fallii hattattamaa argamuun harkifateef ammoo dukkana hundaatti ila baasaa jirtu waliin uf/wal/Oromoo/Oromiyaa irraa laaluu dhugoomsuuf,
iv) Haalaa fi akkaataa jiruu-jireenna WBO ZK kan guyyuu, ba’aa ulfaataa/hadhaawaa maqaa ABO/QBO/Oromoon baasaa turree fi ammaa iyyuu baachaa jirru qaamaan yaadachiisuuf,
v) Wareegama bifoota lubbuu, jireennaa, daaraa, hanqinna fayyaa, ‘marfama siyaasaa’, sababaa dhibdee dhaaba ABO keessatti ‘Gadaa Oromoo-abbaa-lamaa’ guutuuf deemaa jiru irraa kan ka’e, humna WBO, ZK ABO, miseensota ABO…………..fuula lafaa gamanaan fi ummata Oromoo akkasuma olloota Oromoo (akka ummatootaatti) mudataa ture fi jiru/kan itti aanee dhufus wal agarsiisuuf. Obsa, murannoo, tokkummaa, hamilee qabnu, akkasuma fedhii, kakuu……akeeka nagaa, araarraa fi tokkoomuu kana laalchisee gamanaan jiru wal daawwachiisuuf,
vi) Akeeka nagaa, araaraa fi tokkummaa laalchisee gara garaattis ykn waloonis ta’u fedhii, diddaa, yaalii….gartuulee/hogganni ABO 3ni qaban bakka takkaatti waliin waliirraa dhagahuuf carraa argachuuf, yo hin feene maaliif akka ta’e ykn fedhan/fudhatan/eegalan sadarkaa maalirraa akka jiran, yeroo akkam/hagam akka isaan fudhatu malu tilmaama hoogganoota kannaa irraa dhagahuuf, yaada irratti laachuuf. Furmaata hundaaf tolurratti qamaan yaaduma illee itti kennaatuuf,
vii) Hogganni gaafatama dhaaba ABO-takicha kaleessa itti miseensomnee qabu, zoonii qabsoo ABO Kibbaa saaqee/moggaase ture, Koroota Sabaa ABOn heeraan utubame, haala dhiibbamuu/moggeeffamuu humnaa/ZK kan wal dhabbiilee dhaabaa barootaaf furuun hanqatame gumaache – (ar’aaf akka murnoota ABO3n-ttis jiraatan), qaama heeraa ABO KS 3ffaan raggaaseen utubamani, itti-gaafatama WBO/Dirree Kibbaa ABOf, qabeenna qabsoo fi dhaabaa ummatni Oromoo/miseensotni ABO maqaa qabsoon/WBOn/dhaabaan isaaniif gumaacheen akka nu jireessuuf hagasuu dirqama jaarmayaa waliigalaa, seenaa fi Oromummaa qaban yaadachiisuu, wal marihachiisuu, ofirratti murteessuun jireenna humna kana iggiteessuu yaaluuf….fi kkfaa ture.
ABO3n keessaa lama (2) didani, tokko (1) qofti owwaachuun mirkanaa’e.
Guyyaan beellamaa maayyiitti jilli gartuulee ABO3n qaamaan dirree Kibbaa ABOtti argamuu qabanne, gaafa Muddee 15, 2009 ture. Haa tahu malee, haga guyyaa fi yeroo ibsi kun faca’u kanaatti, gartuulee sadeen keessaa lama yeroo nurraa hafuun mirkanaa’u, innii tokko qoftii akkuma gaafanneetti owwaachuu filatani, ZKtti argamuuf dhihaatu akkasuma ejjeennoo qabaachuun gartuulee 3n bira gahame akka asiitti aanuutti beeksifna.
Itti-Bahaa Yaamichaa fi haala ejjennoo ABOn-3n WBO/Dirree Kibbaaf horatuun bira gahame.
1. Gartuu ABO
II: Yaamicha WBO
III: WBO/Zooni Kibbarrati ejjennoo uumatan
IV: Ibsa ragaa, odeessa.
1. ShG ABO
II: Didani jiru.
- Humna/WBO ZK faca’u eegatu,
- Jireenna/qoonqoon akka adabamuuf gumaata jireennaaf gaafatame abdachiisan deebi’ani hanqisan,
- Dinagdee miseensotaa fi deegartoootni isaani biyyoota alaattiWBO ZK kanaan waaltessan gara muraasa gartuun tun bakka biraatti waliitti qabaa tureetti naannessani jiru,
- Ololoota humna ZK balfisiisu gara garaa karaa caasalee qabani dhoksaan oofuufaa.
- WBO Zk akka suduudaan gama isaani deebinu dhiheeffachu, nuti didnaan ammoo faca’u/facaasuuf sagantaan hojjachuutti seenuu,
- Humna muraasa-lama hin caalle fuula kanaatti himatan ariitiin nama itti ida’u, mihoota lolaa itti bituun hidhachiisuutti irratti argamu,
- Akka araarri hanqatee humni ZK kun qoonqoon miidhamuun, gargarsa dhabuun, tura keessa dadhabuun, hamilee caphuufaan….deemee faca’u “xiinxala” aabjuu caasaan dhaamaa jiru,
- Ololoota humnicha, qondaalota, ajajoota, miseensota hoggana fuula kanaatti argaman shakkisiisu oomishuun caasaan oofuufaa hujii taasifatan.
-Haala tokkummaan ABO hin jirre keessatti humni kun akka gartuu isaaniitti deebi’u gonkumaa hin barbaadan.
-Humni WBO ZK agabuun, dadhabsiifamuun, hamileen caphuun..kkf facaafamuun boriif gamanaatti qabsoon akka hin jirre hubatan.
--ABO/QBO/Oromo akeeka WBO ZK kaase kanaan alaatti kan baasu akka hin jirre ifaatti ibsatuun hubatame.
- Yaamicha qaamaan WBO ZKtti dhaquu kan fudhatameef haaluma humnichaatu, yaada, dhaabbii, hawwi tokkummaa qaban jedhamu kanaa iyyuu qaamaan daawwachu filatan.
- Akkuma ilmaan Oromoottuu, humna dhaaba ABO, qabsaawota illeetti hamilee WBO ZK eegamuun fardii tahu hawwi, dhaabbii hundaatti ibsatani dha.
- Humna ZK facaasuun/faca’uun bu’aa/furmaataatti laallatu,
- Humna tana diiguuf sagantaan deemaa jiru,
- Ololoota akka malee fi maqaa balleessii addaa, kan gartummaa qofa calaqisu humnicha, qondaalota, ajajoota WBO fi hogganoota irratti biyyoota ollaa fi alaatti ifaatti oofuun ni dhagahama,
- Dinagdeen humna/namoota sossobuu, doorsisuu fi sodaachisuun dhaabbataa dha.
-Akeeka tarkaanfii, yaamicha nagaa, araaraa..WBO ZK xureessuuf, shakkisiisuu, dadhabsiisuu, hanqisuu hijii godhatani jiru,
-Humni kun gartuu KY jalaa bahu sana amma gara haaloo/hijaa itti qabachuutti cehan.
-Miseensota Hogganaa, qondaalota, ajajoota’ humnicha nu jalaa baasan’ jedhan tarrisuun tarkaanfiin irratti fudhatamu akka qabu jalqabuma irraa warrii addeeffate ni turan, hordofiittis jiru.
- Ergaa akka gaafataniitti humni dhaabbii jijjiirachuu didee, gama isaaniittis deebi’u lagate as, gamanaan lafarratti campaign addaa addaa oofuu, gochaalee fofokkaataatti seenuun ni beekkama.
- Daandii qunnamti dhoksaa, maallaqaa fi kkf ZK keessatti dirriisuun, miseensota dhaloota tokko qofa kana tahan dirree/humna keessaa gara biyyaa ollaatti yaasan. Haga ammaatti jaallan shan (5) gara Nairobii gahuu ummannu ni beeka.
- Addatti biyyoota alaatti ifaan ololoota ZK/humnicha/qondaalota/ajajoota/hoggana miidhuu tilmaaman babbal’isu,
-Tarkaanfi, ejjenno nagaa…WBOZK sana, akka sagantaa gartummaa gsrs biraa, ksn dhaloota Oromoo fuula kanaa tahetokkootti akka hundaan laalamu huji dirqama taasifatani jiru.
- Torbaanuma kana keessaa miseensi gartuu tanaan qunamamuu tokko miseensa dhaabaa biraa battalummaatti halkan ajjeese qawwee lamaan miliqee jira. Kukkunfakkii haalota foffokkataa gartuun tun ijjaan itti jirtuuti.
-Gorsa akka haala akka malee akkanaa irraa dhaabataniif hoggana jaarmayaa KYtti dabarfannebakka dhabe jira.
- Haalota kana hunda miseensotaa fi ummatni kan ifaatti argu, beeku fi ragaan dhiheessuun danda’amuu dha.
Silaaftuu ABO 3nu yaamicha ijibaataa nagaa, araaraa fi tokkummaa ….akka oliitti tarrifameef/himameetti dhihaateef irraatti argamuun fi/ykn diduun mirga tokko tokkoo gartuulee ABO3nii ti. Mirgaa fi haqa gartuulee ABO 3n kamiitu tahu kan hin dandeene garuu, yaamicha jila ZKtti ergachuu diduu danda’an, diduu malee, faallaa nagaa, araaraa fi tokkummaa labsanne, humnaan zoonii WBO Kibbaa fi humna WBO tana diiguuf murachuun, sagantaa nu facaasuu baafachuu, tanuma hujii qabsoo taasifachuu, haaloo/ijjaa qabachuun mirgaa fi haqa isaan tokkoo illee tahu yoomi illee hin danda’u jenna.
Dhugumaatti kan tahuu isaatti kana booda Oromoonu akkuma dhala ilma-namaa tokkootti itti qaanfachuu eegalu qabu jira jenna. Kunis, amaloota yeruma hundaa iyyuu maqaa qabsoo/Oromoo/tokkummaa afaaniin faarsaa, gama kaaniin dhiiga Oromoo akka maleetti lolaasuutti hujoomuu kana; dahannoo hujii dhaabaa/qabsoo jedhu jalaatti dhokatani, ar’aa illee lafee Oromtichaa-Oromomtittii waliin bobbeessuu itti-fufuu hoggana jaarmayaa qabsoo bilisummaa ofiin jedhani, kan akka garii gartuulee dhaaba ABO-3ni lagatamu qaban jenna.
Sababumaa fedheefu, yoomi illee, essaattis gartuulee ABO-3n keessaa tokkoo illeen WBO ZK, miseensa ABO, ilma Oromoo fi deegaraa gartuu isaan kamiituu lubbuu, maqaa balleessuu itti/ofiitti/waliitti dhiifamuun mataan isaatu yakka jenne jirra. ZK, WBO ZK, miseensota ABO, deegartoota fi ummata Oromoo akkasuma olloota Oromoo kanneen tahan irraan balaan haga yoonaatti maqaa QBO, dhaaba ABO fi fuula sochii QBOtti waggoota 18n dabraniif geessifamuu seenaan galmaa’e jiru isin gahu qaba jenna!
Irraa dhaabbachuu hanqatani sanuma itti-fufani akka amma deemaa jiruutti karoora ofittummaa balaa qofa dhalchu kanneen maqaa qabsoon qindeessuutti jabaachuun ammoo yakka, daba, cubbuu jenna. Yo ammoo yakkii akkasii ammaas qabsoo jedhameen, jabina, qarooma, jannooma, haxxummaa fi tarkaanfachuu akkasuma guddinaatti kan ilaalamee itti dhiibatamu filatameef, ammaaf kan jechuu dandeennu hiree tanaan guyyaa ar’aa haalicha Oromoof gabaasaa, itti-gaafatama haala itti aanee gamanaan dhufu kamuu kunoo uf- bira dabarsuu galmeessina.
Ejjennoo, yaamichaa fi akeekni nagaa, araaraa fi tokkummaa yakkaa nutti tahuu gaddina!
Osoo hidhanoo ofiis tahe qabeenna qabsoo fi zoonichaan ittisuuf gahu qabnu, nagaaf jecha akkuma seenaa fi aadaa Oromtichaatti marra/marga fi daraaraan araaraa fi tokkummaaf amna eegallerratti ammaas dhiigni Oromoo, miseensa dhaabaa ZK dhangalaafamuun hiree nuuf tahutti hedduu gaddine!
Nagaa, araaraa fi tokkummaan dhaaba teennaaf, miseensotaaf, hoogganoota jidduuf, QBOf fi Saba keenanaf hawwine, akka fala takkichaatti wareegamaan ejjennoo itti fudhanne jirru kun, hanqachaa dhufuun osoo hedduu taajjabsiisaa tahe jiru, balaa diigamuu, facaafamuu humna WBO ZK ABO gaaduu fi dbree ammoo wareegama olaanaa baasuu nu dhaqqabsiisee jira.
Tattahiinsii kun hundi fi abjuu nagaa, araaraa fi tokkummaa nuti dhaabaa, QBO fi ummata Oromoof dhiheessinee kun hanqatee, bakka isaa kan argannu faallaa sanaa ajjeeffamuu, facaafamu, agabuun miidhamuu, moggeeffamu, dhaabuma wareegamaafi baaneen/jirruun gamtaan nutti duulamu, tuffachiifamu, maqaa/seenaa gurraatteffamuu, akka mineensaatti adamfamuu fi kkf WBO ZK irratti barana raawwatamaa jiru/deemu, itti-calliffamuun gochaalee gartuulee ABO laalchisani gadaannisa gaabbuu seenaa keessatti yoomi illee namuu jalaa hin baane sumudee dabruu isaa namuu mamuu hin qabnu.
Gartummaatti hirmaachuun kanaan dura dhiiguu WBO ZK fi ABO/QBO/Oromootti fide. Gartuummaa mormuunis kunoo miidhaa olaanaa fidaa jira. Nagaa, araara fi tokkummaa yaamuunis akkasuma wareegama agabuu, daaraa, moggeeffamuu, nutti duulamuu qofaatti osoo hin dhaabbanne haga facaafamuu, diigmuu eegamuu fi lubbuun ilmaan Oromoo balleeffamuu fidee jira. Duuba Oromoo, amma dhaaba ABOf, QBO fi Saba kanaaf maal wayyaa jettu?
Duuba nu illeen Oromoo dhuma. Nagaa, araaraa fi tokkummaaf dhaabbanne malee, cinaachuma dhaaba ABO ti. Waraanni Bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa kun ABOn ijaaramee, haga ar’aatti dhaabuma kanaan hidhachiifamee dha. WBO ZK humna qabsoo Oromoo kan ajajaa dhaabaa ABO waalta’aa taheen (haga waaltominnii ABO tureetti) seenaa ABO fi QBO Oromoo dhiigaan barreessuu keessatti galmeen yaamtuu dha.
ABO ammoo dhaaba qabsoo bilisummaa, kan seenaa Saba Oromoo irratti yayyabame/bu’ureeffamee dha. Dhaaba Oromoof ijaarame; Oromootaan ijaaramee fi Oromootaan durfamuutti beenna; dhaaba warraaqaa, dhugaa seenaa Saba Oromoo boolla keessaa qotee baase; kan ummatni bal’aan Oromoo akka ilma-tikkicha hawwiitti laalaa as gahe; dhaaba qabsoo dhaan, akeeka bilisummaa Oromoo, seenaa, kabajaa, afaan, aadaa…fi kkf Oromoon qabu fi hawwu ibsee addeessee tahuun nuufis ar’aa illee mamii tahu hin qabu. Nuufis ABO teenna! Nus Oromoo dhuma! Qabsoofis wareega baasaa akkuma turre ittiis jirra! Dhimma Oromoo, ABO, qabsoo, egeree fi seenaa laalchisee akkuma dirqamaa sanaatti mirgaa fi hiree wal fakakataa fi wal qixa tahe akka qabaachuu qabu ar’aa illee nuuf nutti jibaachuu dhabuu garii gartuulee ABO mirkanaa’aa dhufe isaan qofa osoo hin taane, miseensotaafi ummata Oromoo iyyuu taajjabbii jala galchu jenna.
Eegaa WBO ZK, dhimma dhaaba isaa ABO, egeree qabsoo fi sabichaa seenaa ulfeeffamuu akkasuma hunda keenanan tikfamu qabu kanneen herrega keessa galchuu dhaan; akka ABO baduu irara dandamchuu bira dabree, jabaachuun isaa QBO finiinsee; Galiin Kaayyoo Oromoo galma gahuuf jecha; tarkaanfii, yaamicha fi ejjennoo nagaa, araaraa fi tokkummaa labsanne turre. Seenaa ulfaataa kana qallisuun ykn haphisuu osoo hin taane, waan jabduu akka yabbuu gogaa Warseessaa tahee tokkootti akka beeknu fi akkasiittis akka hubatamu feena.
Ammaajii 01, 2010tti nagaa, araaraa fi tokkummaan didamee hafnaan, seenaatti dudubbata jenna!
Deemsa, tattahinsaa fi haalota kanneen nagaa, araaraa fi tokkummaa barbaaduu irratti nu mudataa jiruu fi mudachuuf deemuutti tilmaamamu kanneen asumaatti uddeeluuf wanni jennu; Akkuma oliitti ibsame, nuti WBO ZK, seenaa dhugaa, kan baaneef ummata Oromoo ammas mamii malee hubachiisu feena.
Dhimma dhibdee ABO furuu irratti carraan takkichii hafe nagaa, araaraa fi deebi’ani tokkoomuu moonaa dhaaba seenaan waliitti nu hidhe kanaa, moonaa QBO fi gabbifamu gurmuu Saba Oromoo tahu amma illee akkuma itti amanneetti jirra.
Kanuma waliinuu nagaa egeree Oromoof furtuu taate; Araara dheebuu Bilisummaa Saba keennaaf Karra-Gaddaa tahu beennu; tokkummaa yaamamuu dhaaba ABOf akkasuma bakka gahuu Kaayyoo siyaasaa Oromoof murteessummaa sadarkaa akka du’aa fi jireennaa taheetti ammanaa, akka amanamu barsiifna.
Duuba, labsii egeree hunda keennaaf akkanaan murteessaa tahe kun, akkanumaan harkifamee hundaan kan didamuu fi hanqifamu yo tahe, nuti WBO ZK, Dirree qabsoo ABO Kibba Oromiyaa fi fuulli lafa Oromoo gamanaa haala irra-dibaa fi dimimmisa hin qabneen seenaan duddubbata jenna!
Dhaamsa/yaamicha ar’as qabnu;
1. Miseensotni ABO fi ummatni Oromoo bal’aan ammaa illee taanaan kunoo haala nagaa, araaraa fi tokkummaan waan hundaaf ni tola jennee waliin itti amannu gara hanqachuutti guduunfamaa jiru, miidhaa haalli akkasii egereef qabaatus gahummaan akka waliin hubannu ammaas yaadachiifna. Itti-fufa amaloota diiggaa, fedhii didiqqaa namootaa, ilaacha wal moo’uu hogganoota ABO, murnummaan Oromoo caalchifamuu, dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu itti fufsiisuu fi gochaalee qabsicha hiddaan buqqisuu karorfatamuun deemaa jiru kanneen ariitiin, ammuma dhaabsuuf akka waliin dhaabbannu jenna.
2. Gareelee ABO sadeeni keessaa QC-ABO akeeka, tarkaanfii, ejjennoo fi yaamicha WBO ZK kan nagaa, araaraa fi tokkummaa mararfachuun itti owwaachuu qofa osoo hin taane, wareegama kanuma qofaafuu WBO ZK ergasii guyyuu baasaa jirruu ulfeessuu isaani Oromoos beeksisaa, ofiifis hubannaaf.
3. Ammaa illee taanaan Oromtichaa fi Oromomtittiin, keessattu ammoo miseensotni ABO humna WBO ZK ABO akka agabuu/qoonqoon adabamuu, miidhamuun faca’u akka hiree dhumaatti itti murteeffamaa jiru kana waan dandeettaniin qulaamsattan iyyannaa Oromummaa ida’anna.
4. Dubbii nagaa, araaraa fi tokkuummaa wareegamaan yaamne jirru kun gara itti deemu hubachaa waan dhufneef akkuma ibsaa WBO ZK isa dabre keessatti dhaamanneetti kanafu ar’aa irraa kaasee WBOn ZK ABO gara aadaa Gadaa Oromoo (Rabaa-Gadaa) fi Waldaa Machaa fi Tuulamaatti himata keenna haalota kana hundaa dabarfannee akka jirru kabajaan hunda beeksifna.
5. Beellamni gabaasaa WBO ZK kan dhumaa, dhimma yaamicha nagaa, araaraa fi tokkummaa 13/10/2009 hundaaf labssinee, akkuma jalqabuma irraa waliin qabanneetti, dhugoomuu fi hanqachuu akeeka kanaa gama keennan ibsa itti aanuun ni dhihaata. Kunis gaafa ayyaana WBO seenaan nu badhaase sun, Ammajii 01, 2010tti taha. Hagasiittis hawwii ABO tokkicha: WBO takkichaa fi Oromoo tokko taatu walumaan itti deebine arguu dhundhumanne sunis ammaas kan fuluma ofii jiruu fi obsaan eegachaa jirruu dhaamanna.
Hagasiittis, ammaa illee dhibee ulfataa fi fokkaataa moonaa ABO/QBO/Oromoo gara balleessuutti geesse kana karaa gaaddisa nagaa, araaraa fi tokkummaan hiikkaa itti argamuu akka danda’u fi furmaatni dhumaa osoo kana caala hin farkifamnee, ariitiin waloon itti soqamu qabu filanna.
Balaan tokkummaani hanqachuutti aante itti fuftu, hundumaas dhiba. Balaan akkasii gara tokkoof toltee, gara kaan qofaaf (fknf. Nuti WBO ZK tanafaa qofaaf!) hammaatti jennee hin amannu.
Oromoon tokko (ykn cinaachi ABO tokko) Oromoo dhuma akka isaa/isii kan nagaa kadhachaa oolu tahe, kaan ammoo is nagaa/araaraa/tokkummaa kadhatamu tahuu itti-fufuun kun guyyaan dhumatu fagoo hin jiru. ‘Adoo gaafaaf boonnu gurraa nu murani’ tana dhaabsisuuf ammuma illee ijibaata haa goonu.
Duuba fafa seenaa keessatti dhiifama hin qabne, kan walirraa baqatanii hafuun akkanaa kun egeree ABO, QBO fi Oromoo irraan gahuuf taa’u, ammaa illee ittuma yaadamee, hanqisuun hin dabarre jenna. Hundi xuruuraa gabrummaa kanaatti dammaqee, akka seenaa dandamachifnu, egeree iggiteessuuf waliin hojjannuun ABO/Oromoof irra qaroomaa kunoo dhaamanne!
Muddee 19, 2009.
Also visit our temporary blog, http://dimaoromo.blogspot.com
Posted by Dima Oromo at 5:08 PM No comments:
Guyyaa: Sadaasa 29, 2009
Ibsa WBO ZK - Xalayaa Lakk: 0001/ibsa-wbozk-abo/2009,
Ejjennoo WBO ZK - Xalayaa Lakk: 0002/ejjenno-wbozk-abo/2009 fi
Yaamicha waliigalaa – Xalayaa Lakk: 0003/yaamicha-wbozk-abo/2009 ture.
‘ABO 3n’ jechuun gartuulee ABO Shanee Gumii (ShG ABO), Qaama Cehumsaa (QC ABO) fi Koree Yeroo (KY ABO/Jijjiirama) wal duraa duubaan ibsoota babaasaniin tarkaanfii deegarsa nagaa, araaraa fi tokkummaa WBO ZK fudhate kan deegaran tahuu, akka kanaan gadiitti beeksifatani turan. Kunis, akkuma wal-duraa duubummaa ibsa baasaniitiin;
Idileetti, akka gartuulee fi jaarmayaalee sadaniittu nagaa, araaraa fi tokkummaa jedhame fedhurratti wal fakkeennan ibsatu,
QC ABO fi KY ABO tokkummaa fakkaataa (gara garaatti) bara dabree keessa akka jaarmayaatti yaamani turan milkeessuuf, karuma isaani itti fufani dhiibuu filatu. KY ABO daandii marii tokkummaa eegalan milkeessuuf warri hafe akka isaan waliin dhaabbatuun irraa wayyaa dhiheeffatu. QC ABO yaamicha isaani kan karaa qabate jiru waan irraa gahu baruuf ammaaf sanuma eegu filatu.
QC ABO araaraa, tokkummaa fi maanguddummaa jiddu-galummaa qaama ‘bu’ureessitoota fi buuleyyiin’ geeggeffamuutti hin amanu, irra illee hin hirmaanne/hin hirmaatus..
ShG ABO fi KY ABO jidd-galummaa bu’ureessitootaa fi buuleyyiitiin’ waliitti haasawuu fudhatani turan. Tahu iyyuu, haga ammaatti marroo tokko qofa akka haasawani fi kan lammeessoo fuula dura isaan jira jedhu. Lameenuu akka jaarmayaa fi hogganaatti suduudaan waliitti siquu ykn haasawuuf hedduu addaan fagoo jiran, fedhii akkasiitis ammaatti hin qaban.
ShG ABO hoogganaa fi jaarmayaa QC ABO waliin suduudaan haasawuun waan tokko irraa gahu akka malan himatu. KY ABO fi QC ABO illeen akkasuma sadarkaa waliin xumurachuu irraa gahaa jiraachu himatu.
ShG ABO fi KY ABO ofiif waliin nagaa bu’uudhaa fi waliitti araaramuuf (suduudaanis tahe qaama araaraa jidduu taa’uu kamuu keessaan), waliitti dhufuu osoo hin taane, isaan kamuu gara garaatti WBO ZK akka suduudaan isaaniitti deebi’u gara garaatti barbaadan, gaafatan.
ShG ABO fi KY ABO jidd-galummaa qaama ‘bu’ureessitootaa fi buuleyyiin’ waliitti haasawuuf yaamicha qaama kanaan godhame tureef owwaatanii uyyuu, lameenuu, waltajjii sanaan waliin fixachuuf walirrattis tahe, maanguddummaa sanarratti abdii hin qaban.
Sababoota adda addaa tarrisaniif, karaa waltajjii jaarrrummaa qaama araaraa (‘bu’ureessitoota fi buuleyyii’) kanaan, rakkini ABO kun furame, tokkummaan hawwamu dhufuu isaa, harkii caalaan hooggana gartuulee ABO, miseensotaa isaanii fi deegartootni gartuulee kanneen jala hiriiran amanti hin qaban.
WBO ZK kun tarii nagaa, araaraa fi tokkummaan gaafate hanqaturraa fi/ykn haaluma rakkina gara garaa dirree qabsootti beekaman adda addaa irraa, akkasuma tura keessa abdii kutatuu dhaan gara faca’uufaatti deeminna ‘abdii’ jedhuun, akkuma kanneen haala akkasii keessaa waa eegataa jiran dhagahaman/mumul’atan, kan haala akkasii mudatu keessatti humna ‘masaanuu’ jedhamu diqqaa cinaa sanaa qabaatu abdatan (kan amma nama itti leejjifatuun dabalatuuf fiffiigaa jiramu), ‘qaawaa’ humni guddichi ZK kun irraa ‘deemuun’ uumuu malu buufatuu dhaan, “qabsoo itti fufuu” kan tilmaamatanis hin dhabamne. Garuu Itti-bahaa yaamicha WBO ZK nagaa, araaraa fi tokkummaa irratti kan hirkatuu fi gaafa Ammajii 01, 2010tti gara taheetti kan mirkanaa’u, yoo tokkummaan hin jiraannee, sanaan achi qabsoon dhuga waan hin jiraanneef, fuula kanaatti maqaa hin jirreen, sana booda ummata Oromoo miidhuun kanaafuu akka hin jiraanne WBO ZK ammumaan hunda akeekkachiifna.
Ilaalchaa fi ejjennoon goggodduun adda tahe ammaa illee gartuulee ShG ABO fi KY ABO jidduu caalaatti mul’ata. Laafaatti fi dhihoottis kan waliitti siquun hin eegamnes kanneen kana jidduu dha. Sababiin hundee haala kanaaf hubatame, addaan bahinsaa fi morkiin jiddu jirru yeroon isaas dhihoo fi ammaa illee oowwaa waan taheefaa fakkaata. Gartuun lameenu QC ABO waliin haasawuu fi yo tahe gara fixachuutti kan deemu maluuf adda addadummaa, morkaa fi falmiin QC ABO waliin gara garaattis isaan qaban isa turaa, kan qabbanaa’e jiruu fi dubbiin QC ABO baroota waan laaka’atee jiruuf kan hundaaf caalaatti haffallate fakkaataf. Falli gartuun lameen dubbiin jidduutti ammaa illee jabduu kun laalaa jiran keessaa haalli addaan jiraatu isaani kun akkuma kan QC ABO sanaatti baroota haga tokko itti fufe yo laaka’ate, dubbiin ofumaanu dhama fixachaa, barrii/haalotni biraa dubbii jidduu dulluumsaa deemuu fi qabaneeffatufaa waliif tilmaamu.
Cuunfadhaan dhugaan jirtu garuu, harki caalaan gartuulee ABO jiran kanaa nagaa, araaraa fi tokkummaa jedhame idileetti kan fedhan tahu himatani illee, bifa, akkaataa, yeroo fi haala dureelee gartuu isaaniif caalmaatti bu’aa qabaatu qofaan kan itti seenan akka haala dureelee ifaatti hundaatti hin himamneetti gra garaatti qabu. Warra waliin nagaa bu’an, waliitti araaramanii fi waliin tokkoomanis ulaagaa mataa isaani kaayyatuu dhaan kan filatan fakkaatu. Araaraa fi tokkummaa maanguddummaan ykn gartuulee sadan jiran keessaan kaaniin ykn WBO ZKn dhihaatu osoo hin taane, yaamichaa, sagantaa fi qophii ofii isaaniitiin dhufu gartuuleen harkii wayyaan barbaadu. Itti yaamamuu fi kaan irraan dhufu irra, tokkummaa ofiif yaamaniin, abbaa itti tahani, maqaas itti fudhatani tartiibuma isaaniitiin, ariiriitii tokkoon maleetti geeggeffatu/geeggeffamu kan filatu fakkaatu..
Faarulee, ergaalee, dhaamsa/dhaamannoo, murannoo, dhaadannoolee tokkummaa ABO/Oromoo fi kkf suduudaan walgahii waliigalaa dhihii dirreetti baklka takkaatti geeggeffateen muraasotaa fi buttaaleen WBO ZK akkasuma jaallan fi ilmaan Oromoo gamtaan; Hogganaa fi miseensota gartuulee ABO sadaniif, ummata Oromoof fi Zoonilee WBO hfan akkasuma miseensota WBOf fi kkftuuf qopheessani dhaammatan bifa DVD dhaan suduudaan karaa caasalee isaanii fuula jirruutti argamaniin ABO 3niif erguu gabaafna. Ummata bal’aas karaa waltajjiilee fi walgahiilee gara garaan gahuuniin karoorfame jira.
Hogganootni jaarmayaa gartuulee ABO sadeen, ergaa nagaa, araaraa fi tokkummaa dhihaateetti akkuma ibsootni jaarmayoota keessani jaqaba addeesse tureetti dhugaan kan itti-amantan taate, gareen jirtan kamuu guyyaa ar’aa irraa kaasee qaama hooggana sadarkaa olii keessaa namoota lama-lama (2:2), bakka buufachuun zoonii WBO Kibbaatti akka ergattan isin afeerra. Hiree sanaan ejjennoo nagaa, araaraa fi tokkummaa hawwame irratti jaarmayaa fi hogganni keessan qabdan akka humna waraana keessaniitti ibsattani fi dhaabbii akasuma dheebuu nagaa, araaraa fi tokkummaa ABO, QBO fi Sanba Oromoo WBO ZK kun qabu ofumaafu akka hubattaniif kunoo isin yaamne. Jilli keessan gaafa Mudde 15, 2009tti dirree WBO sana akka dhaqqabu dhaamanna. Haala kan milkeessuuf Qorbituu Takkaarrii waliin akka wal quba qabaatan ammuma irraa dhaamanna.
WBO fi dirreen qabsoo dhaaba ABOn heeraan eessattuu utubamee fi saaqame kamuu haga Kayyoo fi jaarmayaa isaa hin ganiniitti humna qabsoo bilisummaa Sabaa Oromoo ti. WBO ZK fi Dirreen/Zooniin WBO Kibba Oromiyaas qaama seenaa QBO dhaaba ABOn utubamee, diriifamee fi hogganamaa as gahee dha. Gartuuleen ABO sadeenu akka jaarmayaa fi hoogganaattis ar’aaf addadummas qabaatan dhaabaa fi jaarmayaa ABO ti. Waan taheef, WBO ZK rakkoo dhaaba ABO naafifte akka furmaata argatu qofaaf tarkaanfii dhiibbaa waan fudhateef jireenna dhabuu ykn jireennaan doorsifamuurraa, gartuuleen ABO sadeenjiran kun kamuu, ammumaan gaaffii fi kadhaan maleetti qabeenna qabsoo qabdaniin akka dirmattaniif irra deebine yaadachiifna.
Miseensoti dhaaba ABO, deegartooni dhaabichaa/qabsichaa, maanguddooti Oromoo, hayyooti Oromoo, sabboontotaa fi Ka’imani akkasuma haawwan Oromoo tarkaanfii nagaa, araaraa fi tokkummaa ABO, QBO fi Ummata Oromoo dhugoosuuf WBO ZK gaafa Onk. 13, 2009 fudhate kana milkaa’uu fi hanqatuun isaa isiniifis dhimma keessan tahu yaadachiifna. Kanaaf itti dhiheennaan akka hordoftanii fi milkeessuufis bira dhaabbattan gaafanna.
Amma illee taanaan guyyaan ayyaana WBO kan Ammajii 01, 2010 guyyaa itti bahaan tarkaanfii nagaa, araaraa fi tokkummaa waliigalaa WBO ZK yaame kun dhugoomuu fi hanqatuu isaa itti gabaafamu waan taheef, gartuulee ABOs, miseensonni, deegartootaa fi ummati Oromoo sanaa asiitti hamtuu oolchuuf waan irraa eegamu cufa akka tolchitan irraa deebine dhaamanna.
Nagaa, araaraa fi tokkummaan WBO ZK dhaaba isaa ABO, qabsaawota waliigalaa fi Oromoo akka sabaatti dhiheesseef kun sababoota seenaan hin fudhatamne gara garaan kan hanqatuu fi didamu yo tahe, WBO ZK iyannaa fi himannaa isaa yeroo beellameen achiitti gara ummata Oromootti, aadaa sirna Gadaatti fi Waldaa Machaa fi Tuulamaatti kan dhiheeffatu tahu ammumaan hundaatti dabarfanna.
Guyyaa: Sadaasa 15, 2009
Gara: Hoggana qaamota ABO addaan babbahan sadaniif;
1. Jaal Dawuud Ibsaa: HD GS ABO (Gartuu ABO-ShG),
2. Jaal Dhugaasaa Bakakkoo: D/T ABO (Gartuu ABO-QC) fi
3. Jaal Kamaal Galchuu: DD KY ABO (Gartuu ABO-KY/Jijjiirama).
Dhimma: Itti bahii tarkaanfii, murtii, ejjennoo fi yaamicha WBO ZK (13/10/2009), kan haga ammaa wal dhageessisuu.
Dursa nagaa Oromummaa dhaamna!
Wal dhabbii, qoodamiinsaa fi addaan bahinsa dhaaba ABO keessatti baroota 2001-2009 keessatti mudateef falli qabatamaa fi furmaati hawwamu haga yoonaa dhibuu irra WBO ZK gaafa 13/10/2009 fala takkicha hafee jedhame humna zoonichaan kan amanamu tarkaanfi nagaa, araaraa fi tokkummaa moonaa ABO, QBO fi Ummata Oromoo yaamuun ni yaadatama.
Waraanni dhaabaa zoonii tanaa, qaamotni dhaaba ABO wal dhabiilee kanneen irraa wal duraa duubaan adda yaa’an, miseensotni dhaabaa, deegartoota, ummata Oromoo bal’aa fi mararfattooti dhaabaa/qabsoo tanaa akka deegarsa barbaachisu ejjennaa nagaa, araaraa fi tokkummmaa tanaaf laatan hunda gaafate ture.
Mangudootni bu’ureessitootaa fi buulleyyii ABO wal dhabbii murnoota ABO kana araarsuuf akka qaamaatti ijaaramani turan kan dubbii tana hordofaa turuutti quba qabamu ammoo bu’uraa akeeka furmaataa WBO ZK hawwe kanaa tahurra, tarkaanfiin nagaa, araaraa fi tokkummaa WBO zoonii tanaan yaamame kun, deegarsa yaalii araaraa qaama bu’ureessitootaa kanaan eegalame jiru tahe akka hubatamus WBOn ibsate jira. Kanumaafu murtiin waraanaa tun, “tarkaanfi deegarsa nagaa, araaraa fi tokkummaa…” jedhame moggaafame ture.
Eegaa, guyyaa tarkaanfiin deegarsa nagaa, araaraa fi tokkummaa kun WBOn gamanaan guyyaa 13/10/2009 fudhatuun hundaaf labsame as, 13/11/2009 ammoo baatii tokkoffaa dhaqqabne/xumurre jirra.
Itti-bahaan bu’uraa tarkaanfiin, murtii, ejjennoo, yaamichaa fi labsiin nagaa, araaraa fi tokkummaa WBO ZKn baatii tokkoon dura dhihaate ture kun ar’a sadarkaa qabatamaa fi mul’ataa tahe tokko irra dhaqqabuu isaa akka itti aanuutti waliin geenna.
Kunis, qaamotni ABO addaan bahani jiran-gartuuleen yaamichii nagaa, araaraa fi tokkoomuu godhameef sadanuu, wal duraa duubaan, sirnaan akkuma jaarmaya-jaarmayaatiin;
Tarkaanfii, murtii, ejjennoo fi yaamicha nagaa, araaraa fi tokkummaa WBO ZK dhiheesse akka deegertan, fudhattan fi milkeessuuf hojjattan ibsoota baaftaniin beeksiftani jirtu.
Murtiin deegarsa kanneeni fi labsooti sana hammatan; akkuma wal-duraa duubummaa baafamaniitiin;
iv) Shanee Gumii (Shg-ABO), ShG GS ABOn – Gaafa Onkololeessa 20, 2009.
v) Qaama Cehumsaa (QC-ABO), KHGn – Lak.111/ABO/09, Onko.26, 2009.
vi) Koree Yeroo (KY-ABO), WKYn – Gaafa Sadaasa 07, 2009.
Hamma sadarkaa fi guyyaa kanaatti, wal fakkeennaan yaamicha nagaa, araaraa fi tokkummaa dhihaateef owwatuun kun abdachiisaa jenna.
Murtiilee fi deegarsa jaarmayaa keessa (akka gartuulee sadaniitti) barruulee ibsa sirnaan baaftaniin mirkaneessitani jiran walgahii humna WBO Zoonii kibbaa bakka takkaatti geeggeffamuun dhugomeef gabaafamus hubachiifna. Haa tahu malee hundi keenna, miseensotaa fi ummata Oromoo ida’annee, gaaddis akeekatame kana dhugoomsuuf hujiin caalu akka nu hafuu fi waliin tahanii milkeessuuf hojjatu akka gaafatu mamiin hin jirtu.
Gama kaaniin, qaamni maanguddummaa dhimma kanaaf eegamaa jiru, miseensota bu’ureessituu fi gameeyyii ABO akeeka kanaaf ijaaramuun dhagahamaa ture, kan WBO tarkaanfii fudhateen deegaru labse, akka abbaa dhiibbaatti eegaa jiru, haga ammaattu irraa dhagahuun hin danda’amne.
Ibsa faca’eetti ida’ee marroo lama barreeffama suduudaan karaa D/Buutuu qaamichaa, deddeebi’ee yaamichii tolfameefi, akkasuma deebisaan bifa tahee iyyuu, qaama araaraaf utubamuu faarsaa turre irraa dhibuu isaa, taajjabbii olaanaan isin hubachiifna.
Beellamni dhumaa qaama maanguddoota araaraa bu’ureessitootaa fi gameeyyii dhaabaa kanarraa dhagahuuf qabame amma gaafa 15/11/2009 tahus achumaan quba wal qabaachifna.
Beellama maayii kanaatti qaama bu’ureessotootaa kana irraa kan dhageennu fi/ykn nurraa hafuu isaani irratti kan hirkatu, gaafasuma irraa kaasee kanaafu isin matootni hoggana gareele ABO sadan, haala maangudootni nurraa hafuu malan akkasii keessatti, akkamiitti akka dhimma ulfaataa fi dhaaba ABO akkasuma Oromoof hunda caalaa fardii jedhamu kana itti gara gaaddisa waloo kan nagaa, araaraa fi tokkummaaf itti wal gahamu sana armuma irraa waliin itti fufsiifnurratti akka yaada wal jijjiirannuu, marihannuu fi waalteffannu kabajaa Oromummaan isiniif dhiheessina.
Marii dhiheessaa jirru tanaaf fakkii/ka’umsaa tahuuf gargaaru qofaaf, akkana yo jedhame hoo?
Haala maangudootni qaama araaraa kun guyyaa oliitti akeekametti akkuma haga ammaa cal’isaniitti, achumaan dhimma kanarraa kan hafan tahan, akeeka nagaa, araaraa fi tokkummaa fudhatuun hundaa dhihaate kana karaa buusuuf akka gargaaruuf, yaada akkanaafaa eeruu yaalle;
Akeekni maanguddummaa silaa bu’urrummaan waliitti nama harkisuu, haala tasgabbeessii, jidduu taa’uu, raggaa ta’uu fi kkf faa tahuutti ilaalama. Ammoo hundi silaas akkuma itti waliif galame akka tahe falamsiisaa miti. Yoo manguddummaan jidduu hundaa jiraatuun ni barbaachisa jedhame irratti waliif galame; Maanguddoota Oromoo/ABO kan gara biraa, ulaagaa hundaaf fudhatamuun, nama baay’ina isaani gama kamuufu wal qixaatti kenname akka dhiheeffatamufaa marihatu.
Hogganni gartuulee ABO addaan bahan sadan kun suduudaan waliitti dhufuu dhaan walii isaatii waliin haasawuun yoo danda’aame.
Tarii hogganni (hoggana jechuun asiitti akka qaamaa fi mataatti illee laala), gartuulee ABO jirtan sadan wakkiila (miseensotaa, qondaalota, miseensota hogganaa, deegartoota fi kkf ) keessaa bakka buufatuun, ergaa baay’ina jila ergatamu irratti waliif galaniin booda, akka waliitti dhufani dhimmota teknikaa gara garaa gaaddisa waloo hawamuuf bu’ura kaa’aniif dursa waliitti dhufuun yo filatamefaa.
Qabxiilee 1-3 olii keessa tokko ykn haga tokko ykn hunda isaani ykn ammoo kanaan alaatti akkaataa biraa ittiin bakka gahame kanarraa fuula duraatti deemamu mariif dhiheessuu dha.
Fardiin marii fedhu innii biraa, bakkaa fi akkaataa itti waliitti dhufamuun hundaaf ykn harka caalaa ykn hundumaafis mijjattu irratti marihatuufaa,
Ammajiin 1, 2010 guyyaa fi yeroo akka beellama dhumaatti labsii WBO itti bahaa yaamicha kanaaf qabatee dha. Guyyaa sanaatti waan kana gara tokkootti baasuun fardii tahuu hubatani ammumaan sagantaa waloon kaa’achuufaa gaafata.
Nama/namoota/caasaa dhimma walumaa galaatti nagaa, araaraa fi tokkummaa dhihaate kanarrtti karaa keessanirraa fuula kanaatti (fi/ykn) bakkoota birootti illee yo feesise wal qunnamamu osoo moggaafamani kanuma waliin waliif eeruun tahe.
Dhimmota kanaa fi kanneen fakkaatoo biroo asirratti hin tuqamanin akkasuma ammumaan irratti waliin dubbatuun hafu hin qabne irratti marii/yaadota’gaaffilee fi kkf waliin godhatuun, fagaattu gaafa Sadaasa 25, 2009tti akka daanduma tanaan nutti deebisuun walumaanu walteffannu, dhaamanna.
Nagaa, araaraa fi tokkummaa dhugaa dandeettii isaatiin Rabbi ABO, QBO fi Oromoof dhugoomsinna jenne!.... Aamiin!!
Sadaasa 15, 2009.
*Qorbituun Takkaarrii qaama waaltessaa-tarkaanfii, murtii, ejjenoo fi yaamicha nagaa, araaraa fi tokkummma WBO ZKn labsame milkaa’uuf isaaf kanneen ilaalchisu hunda waliin hojjatuuf, miseensotaan utubamee dha.
Posted by Dima Oromo at 2:40 AM No comments:
Jibbaata qaama ‘Bu’ureessitootaa fi Buuleyyii ABO’ abbooma araaraaf qabanne turree beeksifna.(Ibsa WBO ZK ABO)
Posted by Dima Oromo at 2:31 AM No comments:
Ibsa Tarkaanfii Deegarsa Nagaa fi Araara Moonaa ABO, QBO fi Oromoo-WBO ZK (13/10/2009)
Guyyaa: Onkololeessa 13, 2009
Deegarsa Nagaa fi Araara Moonaa ABO, Qabsaawotaa fi Oromoo Jidduutti Bu’uu Dhugoomsuuf,
Tarkaanfi WBO Zooni-Kibbaa.
Yoo Oromoon tokkumaan jiraate QBO akkasuma dhaabni ABO jiraata jenna. Kunis, Tokkummaa Ummata Oromoo dandamachiisuu, QBO itti-fufsiisuu fi kallacha qabsoo Oromoo kan tahe dhaaba ABO baduurraa oolchuu qofaan bilisummaan saba Oromoo dhugoomu danda’a jenna.
Posted by Dima Oromo at 4:53 AM No comments:
Ejjennoo fi Kutannoolee WBO ZK ABO (13/10/2009)
Guyyaa: Fulbaana 13, 2009
‘Gareelee ABO’ adda bahan sadeen (QC, KY/Jijjiirama, ShG ABO) jiduutti nagaa fi araari dhugaa bu’e, hoggana Adda Bilisummaa Oromoo tokkochaan dhaabni akka hoogganamu, taligaman murteeffanne.
Uf-diiguun dhuma hin qabne kan yeruma cufaa ABO keessatti deddeebi’u kun, miseensota ABO, deegartootaa fi ummata Oromoo ‘akka galaanaa fuudhee, akka bubbee hargufee, dirree fi qilee hin hawwamneetti harcaasuun’ kun ammumaan dhaabbatu qaba jenna. Amalootni egeree dhaabichaa, qabsoo Oromoo, Ummata Keennaa fi Oromiyaaf gonkumaa hin tolle kun, armumaatti, ar’uma dhaabate tokkumaaf akka waliin hojjannu dabarfanne.
Tokkummaan miseensota ABO, qabsaawota Oromoo fi Saba Oromoo, keessaafuu sababa wal-hadhicha, wal-nyaachuu fi wal-dhabbiilee hin furamneen, hooggana ABO jidduutti dagaage qabsicha gurgurteessee jira. Haali barbadeessaan kun nagaa fi araaraan sirraa’e, QBO bifa tokkummaa fi seera qabeessa taheen fuula duraatti furgaafamu murteeffanne.
Guyyaa barruun ejjennoo teennaa tun tamsaate irraa jalqabee, WBOn zoonii Kibbaa hoggana ABO tokkichaa fi waalta’a tahe qofaan kan ajajamu tahu beeksifna.
WBOn ZK, ‘Gareelee ABO Sadeen’ kamuu wal hin caalchisu. WBO Zoonichaa akkasuma, gareelees ta’e jaallan, tarkaanfii deegarsa nagaa fi araaraa kanaaf kalchan kamuu ni fudhata. Kunis kanneen araaraaf dursa kennan kamuu akka nam-tokkeeleetis tahe, jarmayaa-jarmayaa isaaniitti waliin marihatuuf qophi dha.
Yaamicha nagaa fi araaraa moonaa ABO laalchisee maanguddootni bu’uressitootaa fi buuleyyii ABO, gaafa Mudde 13-14, 2008 Washington DC-USAtti rakkina mooraa ABO fi Oromoo kana furuuf dhiheessan guutumaan guutuutti ni deegarra. WBO-ZK qaamni cufti akka deegaru fi milkessuuf hojjatu gaafanna.
Ololooti diiggaa tahan, wal abaaruun, balaaleffannaan, maq-balleessiin, wal-faaruun-dhaaraa….kkf karaa media, waltajjiilee, bilbilaa, dhaamsotaa, barruulee fi kkf wal jidduutti hujii taasifatamaa jiru, aadaa fafaa kan of-balleessuu tahu hubatmu qaba jenna. Wal moohinsi karaa kanaan dhufu yoom illee hin jiru, hin jiraatus. Hawwii fi akeeka nagaa/araaraa fageessuu tahuun alaatti, hali akkanaa fokkaataan kun booruu lamuu hin qulloofne waan taheef, kana walirraa dhaabuun dirqama jenna.
Diina tarsimoo dhiisuun nagaa laataafi, ufiif nagaa waliitti waakkatuun diina waliitti tahuu qofa dhalche. Akeeka walirratti saganteeffatuu fi kaan-kaan balleessee maquma ‘ABO’ jedhu qofa qabatani jiraatu kunis yakka olaadha. Tokkummaa sabichaa, hayyisa gurmuu miseensota ABO akkasuma qabsaawotaa Oromoo, hiree nagaa fi araaraa moonaa QBO fi dhaaba ABO keessatti tahu qabu irratti demsii kun gufuu ol-aanaa waan taheef, akkasuma safuu Oromummaa illee waan cabsee argameef, hatattamaan akka lagatamu jenna.
Amaloota yareennaa akka malee kanaa fi mallattoolee gabrummaa/ tissee kan akka tokkummaa sabichaa fi sabboonummaa afaaniin faarsaa, hujiin ammoo ‘kophee-deesiftuu’ Oromoo taasisuu, aadaa tahaa turee/jiru kana WBO-ZK jabeessine mormina, dura dhabbatuutti idaanee ni saaxilla.
Garees tahe namoota akeeka nagaa fi araaraa Moonaa Oromoo fi dhaaba ABOf dhihaate kana sababaa fedheefuu hanqisuu galii taasifatuu WBO ZK hubateen akkana jenna: ‘Kufaatii QBO fi maseenuu hawwii Bilisummaa Sabichaaf, akkasuma faca’u tokkummaa Saba kabajamaa Oromoo mudateef, seenaa keessaatti gaafa tokko kan itti gaafataman tahuu akeekachiifna. Kannen akkasii Lubooma itti kaasuun alaattis falli biraa akka hin jireef’ ammumaan herregamu qaba.
Miseensotni ABO, qabsaawotni haftan fi ummatni Oromoo biyya keessatti, biyyoota ollaa fi alaattis argamtan,
Posted by Dima Oromo at 4:48 AM No comments:
Tarkaanfii Deegarsa Nagaa fi Araaraa WBO-ZK ABO
Ibsa WBO ZK ABO (13/10/2009
Posted by Dima Oromo at 4:42 AM No comments:
Yooyyaa! Nageennii Badhaadhaa! Daadoo! Baga Nagaan Dhuftan!
Yaamicha Nagaa, Araaraa fi Tokkummaa Moonaa ABO, QBO fi Ummata Oromoo, WBO ZK ABOn Dhihaateef Owwaadhaa!!
Some of the Oromo related sites : (Hedduunsaanii kan murnoota 'ABO'-ti)
'OLF' fuctional sites: Marsaale murnoota 'ABO'
Jibbaata qaama ‘Bu’ureessitootaa fi Buuleyyii ABO’...